Bongngo TV Apk V1.0 Misintona maimaim-poana amin'ny Android | APKOLL
Bongngo TV Apk v1.0 misintona maimaim-poana ho an'ny Android
Te-hijery maimaim-poana ny sarimihetsika farany, Fampisehoana amin'ny fahitalavitra, andiany ary maro hafa ve ianao? Noho izany, nitondra app anao izahay izay hameno ny filanao rehetra. Antsoina hoe Bonngo TV izy io.
Iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho an'ny sarimihetsika maimaim-poana izy io. Izy io dia manome ny fampisehoana sy sarimihetsika tsara indrindra sy farany. Tsy mila mandany ariary iray hijerena sarimihetsika karama ianao.
Topimaso momba ny Bongngo TV Apk
Araka ny fantatrao amin'izao andro izao dia te hahazo zavatra maimaim-poana ny rehetra. Saingy sarotra ny mahita fampiharana toy izany izay manolotra sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra maimaim-poana hojerena. Afaka mahita fampiharana maro izay mety manolotra serivisy mitovy ianao, saingy rehefa ela ny ela, dia tadiavin'izy ireo hahazo ny premium ianao.
Afaka mahita fampiharana be dia be ianao izay manolotra streaming video. Ny sasany amin'ireo fampiharana streaming malaza indrindra dia ny Hulu, Netflix, Sling TV, HBO, Amazon Prime, ary maro hafa. Fa mba hidirana amin'ny serivisy rehetra dia mila mandoa azy ireo ianao. Noho izany azonao atao maimaimpoana ireo serivisy rehetra amin'ny fampiharana ity.
Tamin'ny voalohany dia manana olana tokana izy ho an'ireo izay tsy mahazatra ny fiteny Vietnamianina. Fiteny ofisialin'i Vietnam izy io. Natao manokana ho an'ny Vietnamese izy io. Noho izany dia sarotra kely ho an'ny hafa izy io, saingy ny interface dia tena mpampiasa-namana. Noho izany dia mora ny maminavina na mahatakatra.
Ny tsara indrindra momba izany Movie App dia ny sokajy, manasokajy ny zava-drehetra. Afaka mahita sarimihetsika na fandaharana amin'ny fahitalavitra ianao. Misy sokajy sarimihetsika mihetsika, sariitatra, Sarimihetsika Adventure, Horror Films, sy ny maro hafa. Azonao atao ihany koa ny mahita sarimihetsika avy amin'ny firenena samihafa toa ny Sarimihetsika Shinoa, Sarimihetsika Britanika, Sarimihetsika frantsay, sy ny maro hafa.
Azonao atao ihany koa ny mahazo ny sarimihetsika amin'ny daty navoakany ary afaka mahita sarimihetsika vaovao amin'ny fanavaozana isan'andro izay hahazoanao ny tsara indrindra amin'ny voalohany. Izy ireo koa dia manolotra ny IMDB ambony indrindra ahafahanao mahazo ny sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra malaza indrindra.
Azonao atao koa ny mampiasa ny sivana sy manova ny fahazoan-dàlana hikarohanao, amin'izay ahafahanao mahazo ny tsara indrindra. Misy ihany koa ny safidy. Azonao atao ny manoratra fotsiny ny anarana na ny teny lakile ao amin'ny bara fikarohana. Amin'izay ianao dia afaka mahazo ny sarimihetsika na ny andian-dahatsoratra ary hanana ny horonan-tsary mifandraika amin'ny teny lakileo ihany koa ianao.
anarana Bonngo TV
kinova Code 4
Anaran'ny fonosana com.bongngo.tv
Android takiana Lollipop (5) - API haavo 21
Endri-javatra manan-danja amin'ny fahitalavitra Bongngo
Misy lafin-javatra maro fa hizara ny sasany amin'izy ireo aho, izay hitako fa mahaliana kokoa momba ity fampiharana ity.
Ity ny lisitry ny fiasa manasongadina
Horonan-tsary avo lenta
Azo antoka ve ny mampiasa Bongngo Apk?
Eny, azo antoka ny fampiasana azy, saingy fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo izy io ka izahay manokana dia tsy maka karazana fiantohana fiarovana. Noho izany raha te hanandrana azy ianao dia azonao atao ny manandrana azy amin'ny risikao manokana.
Manantena ianao fa hankafy ity fampiharana ity dia azonao atao ihany koa ny manandrana ity App manaraka ity
Ahoana ny fametrahana Bongngo TV Apk?
Aorian'ny fipihana ny rohy fampidinana dia miandrasa segondra vitsy ary rehefa vita izany dia mila manova toe-javatra fiarovana sasany ianao hametrahana azy amin'ny fitaovanao. Mba hanaovana izany dia hizara ny dingana manaraka fotsiny azy ireo ianao dia ho afaka hametraka izany tsara amin'ny fitaovanao.
Mandehana amin'ny fametrahana ary sokafy ny tontonana fiarovana,
Kitiho ny 'Loharano tsy fantatra'.
Sokafy ny mpitantana ny rakitra ary sokafy ny fisintomana.
Tsindrio ny Bongngo Apk.
Safidio ny safidy fametrahana ary miandrasa segondra vitsy,
Kitiho ny fisokafana ary ankafizo.
Bongngo TV Apk no sehatra tsara indrindra handefasana sarimihetsika, andian-tantara, fandaharana amin'ny fahitalavitra, ary maro hafa. Manolotra fialamboly tsara indrindra maimaimpoana izy io. Mitsidika hatrany ny tranonkala ho an'ny fampiharana maimaim-poana sy mahatalanjona kokoa.
Sokajy Apps, Entertainment Tags Bonngo TV, Bonngo TV Apk, Bonngo TV App, Movie App Post Fikarohana